Medical० मेडिकल टेस्ट जब तपाईंलाई 30० बर्ष लाग्छ चेकअप - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि बनाम मित्र कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण समुदाय औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार घरपालुवा जनावर कल्याण कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> Medical मेडिकल टेस्ट जब तपाईंलाई turn० बर्ष लाग्छ आवाश्यक हुन्छ
Medical मेडिकल टेस्ट जब तपाईंलाई turn० बर्ष लाग्छ आवाश्यक हुन्छ
तपाईंको 20s तपाईंको स्वास्थ्यको लागि बीचमा एक चाखलाग्दो हो। तपाईं बच्चा हुनुहुन्न आफ्नो आमा बुबाको साथ वार्षिक बाल रोग विशेषज्ञको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, र तपाईं नियमित रूपमा नियमित अपोइन्टमेन्टहरू गर्न पर्याप्त अस्वस्थ महसुस गर्नुहुन्न। पुराना वयस्कहरू गर्छन् । अल्ट्रा व्यस्त जीवनशैलीको लागि रोजगारीको मागमा थप्नुहोस्, र यसले मानिसहरूलाई केहि पीडित हुन दिन्छ भन्नेमा अधिक समझ आउँदछ वार्षिक स्वास्थ्य भ्रमण र चेकअपहरू उमेर age० बाट बाटोमा झर्छ।
यद्यपि, वार्षिक चेकअपहरू र नियमित स्क्रीनिंगहरू तपाईंको युवा वयस्क जीवनमा उनीहरूको बच्चाहरू र वृद्ध वयस्कहरूको लागि हो त्यति नै फरक पार्दछ।
Age० बर्ष द्वारा सिफारिस गरिएका मेडिकल टेस्ट के हुन्?
त्यहाँ recommended० बर्ष द्वारा धेरै सिफारिस गरिएका मेडिकल टेस्टहरू छन्। यी स्वास्थ्य जाँच परीक्षणहरूले तपाईंको रक्तचाप देखि दन्त परीक्षण सम्म सबै कभर।
१. रक्तचाप र कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग
हरेक उमेरमा हृदय स्वास्थ्य मामिलाहरू। Card० बर्षको कुरा सही हो तपाईको हृदय प्रणाली राम्रो स्थितिमा छ भन्ने निश्चित गर्नका लागि गम्भीर हुन। को अमेरिकी हार्ट संघ २० बर्ष भन्दा माथिका सबै वयस्कहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा उनीहरूको रक्तचाप जाँच्न र हरेक four देखि six वर्षमा कोलेस्ट्रोलको स्तर जाँच गर्ने सल्लाह दिन्छ।
जबकि मोटोपना वा मधुमेहजस्ता जोखिम कारकहरूले कसैलाई उच्च कोलेस्ट्रोलको लागि बढी जोखिममा राख्न सक्छ, ती शर्तहरू नभएकाहरू पनि हुन सक्छन् उच्च कोलेस्ट्रॉल एन-मेरी नवारका अनुसार, एमडी, पीएचडी, एक हृदय रोग विशेषज्ञ र ड्यूक विश्वविद्यालयका मेडिसिनका सहायक प्राध्यापक। अर्को शब्दहरुमा, सबैले जाँच गर्नु पर्छ, ध्यान दिनुहोस् कि कसरी तपाइँ तपाइँको मुटुको स्वास्थ्य हुन सक्छ।
तपाइँ काउन्टर मा प्रोटोनिक्स किन्न सक्नुहुन्छ
२. छाला जाँच
At० बर्षमा, तपाई डर्मेटोलजिस्टको बारेमा कुरा गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ मुद्दाहरू जस्तै एक्ने वा एन्टि-एजिंग उत्पादनहरू बारे, तर यसलाई जोड्न महत्त्वपूर्ण छ। छाला क्यान्सर स्क्रिनिंग त्यो सूचीमा पनि।
इरुम इलियास, MD, एक बोर्ड-प्रमाणित dermatologist साथ मोन्टगोमेरी त्वचाविज्ञान सबैले वार्षिक छालाको क्यान्सर स्क्रीनि get १ age वर्षको उमेरबाट सुरु गर्ने सल्लाह दिन्छ। प्रायः व्यक्तिहरू छालाको क्यान्सर स्क्रीनि get प्राप्त गर्न आफूभन्दा ठूलो उमेरसम्म पर्खन्छन्, तर छालाको क्यान्सरले कुनै पनि उमेरका व्यक्तिहरूलाई असर गर्न सक्छ।
डाक्टर इलियास भन्छिन्: स्किन क्यान्सर फाउन्डेसनका अनुसार मेलानोमा १ 15 देखि १ years वर्षमा दोस्रो र सबैभन्दा सामान्य क्यान्सर २ 25-२9 वर्षका क्यान्सर हो भनेर हामी बिरामीहरूलाई सम्झन हौसला दिन्छौं। छालाको क्यान्सरसँग याद राख्नु पर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि चाँडो निदानले राम्रो नतीजाहरू र साना दागहरू निम्त्याउँछ।
H. एचआईभी र एसटीआई स्क्रीनिंग
को रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्र सिफारिश गर्दछ कि १ 64 र between 64 बीचका सबै यौन सक्रिय व्यक्ति जोखिम कारकको पर्वाह नगरी वर्षको कम्तिमा एक पटक एचआईभीको लागि परीक्षण गरिनु पर्छ। जोखिमपूर्ण यौन गतिविधि भएका व्यक्तिको लागि एचआईभीको लागि प्रत्येक तीन देखि छ महिनामा परीक्षण सिफारिस गरिन्छ।
यदि तपाईं यौन वा नयाँ वा बहु सेक्सन पार्टनरहरूको साथ सक्रिय हुनुहुन्छ भने क्लेमिडिया र प्रमेह जस्तो यौन संक्रमित संक्रमणहरूका लागि पनि प्रत्येक वर्ष विशेष गरी २ 25 बर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाहरूको लागि पनि परीक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सविता गिंडे , एमडी, बोल्डर, कोलोराडो मा एक परिवार चिकित्सा विशेषज्ञ। एसटीआईको लागि स्क्रीनिंगले तपाईंलाई पहिले यो पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ, जसले स्वास्थ्य समस्याहरूको होस्टलाई पछि विकास हुनबाट रोक्छ।
डाक्टर गिन्डे भन्छन्, यदि उपचार नगरिएको क्लेमिडिया र प्रमेह तपाईको पेल्विसमा फैलिन्छ र गर्भाशय, फेलोपियन ट्युब र अंडाशयलाई संक्रमित गर्न सक्छ, जसले बांझपन निम्त्याउन सक्छ, डा।
Col. कोलोरेक्टल क्यान्सर स्क्रीनि ((यदि वृद्धि जोखिममा)
एक कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग एक बरु असहज अनुभव हुन सक्छ जुन धेरै व्यक्तिहरू लाज मान्दछन्।यद्यपिएक कोलोनोस्कोपी पुरुष र महिलाहरूको लागि अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण परिक्षण हुन सक्छ किनकि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले कोलोन क्यान्सरको प्रारम्भिक पत्ता लगाउन कोलोरेक्टल स्क्रिनिंग प्रयोग गर्दछन्। को अमेरिकी क्यान्सर समाज तपाइँ कोलन क्यान्सरको लागि औसत जोखिम भन्दा उच्चमा हुनुहुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सिफारिश गर्दछ। जोखिम कारकको उदाहरण कोलन क्यान्सरको पारिवारिक इतिहास, क्रोनिक अवस्था जस्तै इरिटेल बोवेल सिन्ड्रोम (IBS), वा धुम्रपान समावेश गर्दछ। यदि तपाईं उच्च जोखिममा हुनुहुन्न भने, तपाईं अहिलेको लागि यो परिक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई बढि जोखिममा हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो प्रदायकसँग कहिले कुरा गर्न थाल्नु पर्छ र कति पटक कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ।
El. पेल्विक परीक्षा (महिलाका लागि)
स्त्री रोग विशेषज्ञको लागी महिलाको स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी तिनीहरूको किशोर र किशोरावस्थामा। स्वस्थ जीवन कायम राख्न, २१ वर्ष र माथिका महिलाहरूको लागि यो महत्वपूर्ण हुन्छ कि पेल्विक परीक्षा हुनुपर्दछ र तीन वर्षमा गर्भाशय ग्रीवाको क्यान्सरको लागि [स्क्रिन गर्न] पेप स्मीयर गर्नुपर्दछ, डा। हालसालै अमेरिकी क्यान्सर समाजले यसको मार्गदर्शन अपडेट गर्‍यो सर्भिकल क्यान्सर स्क्रीनि delay ढिलाइ सिफारिस गर्न बिरामीहरू २ 25 बर्ष उमेर नभएसम्म
Eye. आँखा परीक्षा
चश्मा र सम्पर्क लेन्स लगाउनेहरू एक बर्षको आँखा जाँचको तालिका जान्दछन्। तर पनि यदि तपाईंको आँखा 20/20 हो र तपाईं आँखा रोग को लागी कुनै जोखिम कारक छैन, अमेरिकी Optometric संघ सिफारिश गर्दछ १ eye र 39 of वर्षको उमेरका बीच प्रत्येक दुई बर्षमा बृहत आँखा र दृष्टि परीक्षा। यदि तपाईंले पहिले गर्नुभएको छैन भने, to० को लागी राम्रो समय हो।नेत्र रोग विशेषज्ञ वा optometrist संग भेट।
त्यहाँ प्रारम्भिक अवस्था हुन सक्छ कि भविष्यमा समस्याहरू रोक्न मद्दत गर्ने आँखा स्क्रिनिंग परीक्षामा पत्ता लगाउन सकिन्छ, युनेरोपोर्ट, एमडी, MPH, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ म्यानहट्टन आँखा । उदाहरण को लागी, तपाईलाई अप्टिक नर्भहरु ठूलो भएको र ग्लुकोमा संदिग्ध, रेटिना पिग्मेन्टेशन, वा सुख्खा आँखा भएको पाउन सकिन्छ। यी सबै उपचार योग्य र रोकथाम योग्य छन्।
आँखा आत्माको लागि विन्डो हुन् - तर तपाईंको शरीरको अन्य भागहरूमा स्वास्थ्य समस्याहरू। आँखा परीक्षा उजागर गर्न सक्छन् अन्य गैर-आँखा सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, वा क्यान्सर।
D. दन्त सफा
स्वस्थ मुस्कान भनेको खुशीको मुस्कान हो, र यसलाई कायम राख्ने उत्तम तरिका भनेको दन्त निरन्तर भेटघाटको माध्यमबाट हो। को अमेरिकी दन्त संघ वयस्कहरूले उनीहरूको दन्तचिकित्सकद्वारा निर्धारित अन्तरालमा परीक्षा पाउन सिफारिस गर्दछन्। औसत व्यक्तिको लागि, यसको अर्थ प्राय: कम्तिमा वर्षमा एक पटक हुन्छ।
At० मा दाँतको जाँच यति महत्त्वपूर्ण छ किनकि दन्त चिकित्सक र हाइजिअनिस्टहरूले तपाईंको मुख गुहा वा गम रोगहरूको लागि जाँच्न सक्छन् जुन पछि जीवनमा गम्भीर मौखिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। दन्त सफा गर्दा गैर मौखिक स्वास्थ्य अवस्थाहरू जस्तै स्क्रिनमा पनि मद्दत गर्दछ मधुमेह । इष्टतम स्वास्थ्य कायम राख्नु तपाईंको समग्र कल्याणको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
सम्बन्धित: तपाइँको लारले तपाइँको स्वास्थ्यको बारेमा के भन्छ
के म गर्भवती हुँदा बेनाड्रिल एलर्जी लिन सक्छु?
रोकथाम महत्वपूर्ण छ
तपाईको २० औं वर्षको अवधिमा, तपाईले उत्तम स्वास्थ्यको तस्वीर मनपर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यो सँधै त्यस्तो हुँदैन। तपाईको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई माथिल्लो अवस्थामा राख्नका लागि प्राथमिक हेरचाह भ्रमणहरू र शारीरिक स्क्रीनिंगको शीर्षमा रहनु महत्त्वपूर्ण छ - र जीवनभर स्वास्थ्यको एक बलियो आधार स्थापना गर्नुहोस् - र सम्भाव्य रूपमा कुनै पनि अवस्थाको प्रारम्भिक शुरुआतलाई समेट्नुहोस् जसले तपाईंलाई रेखामा असर गर्दछ। यसको मतलब निवारक स्क्रीनिंग, तर खोपहरू पनि हुन्।
अक्सर बच्चाहरूका रूपमा हामीले प्राप्त खोपहरू हामीलाई जीवनभर बाँच्नको लागि पर्याप्त छैन। वयस्कहरूका लागि खोप र खोपहरू सिफारिस गरिएका छन्। १ of वर्षको उमेरबाट, CDC बाट सुरू गर्दै तलका खोपहरू सिफारिस गर्दछ : फ्लू खोप, TdaP (टिटानस, डिप्थीरिया, pertussis), MMR (दादुरा, मम्प्स रुबेला), र भेरिसेला (VAR)। भ्याक्सिन नभएका वयस्कहरूले हेपाटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, र ह्युमन प्यापिलोमा भाईरस (एचपीभी) सहित समात्न सक्छन्।
यो कहिलेकाँही व्यस्त वा कठिन डाक्टरको भेटहरूको योजना बनाउन कठिन देखिन्छ। प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको जन्मदिनको वरिपरि भ्रमणको अनुसूची: यदि तपाईं प्रत्येक बितेको बर्षको साथ भेटहरू अप लाइनमा राख्नुभयो भने, यो ट्रयाक राख्न र भेटघाट र स्क्रीनिंगको सिफारिश गरिएको तालिकामा रहन सजिलो हुनेछ।
यदि वित्त भनेको के हो भने तपाईंलाई शारीरिक परिक्षण कायम गर्नबाट रोक्छ, तपाईं जहिले पनि सक्नुहुन्छ क्लिनिकहरू खोज्नुहोस् कि छुट वा स्लाइडिंग शुल्क मापन सेवाहरु छन्। थप रूपमा, तपाइँaमा हेरचाहको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ संघीय योग्य स्वास्थ्य केन्द्र । र प्रिस्क्रिप्शनमा छुट पाउन सहयोगको लागि एकलकेयर प्रयोग गर्न नबिर्सिनुहोला यदि तपाईंलाई स्क्रीनिंग पूरा गरे पछि औषधि वा उपचार चाहिन्छ भने!
तपाईको छालालाई प्रेम गर्नुहोस्: वार्षिक छाला जाँचको महत्त्व
के म काउन्टर मा nasonex किन्न सक्छु?
लगभग कति अमेरिकीहरु प्रत्येक वर्ष पछि आघातत्मक तनाव विकार विकास?
percocet र oxycontin एउटै कुरा हो
चिसो को लागी राम्रो औषधि
कति जनसंख्या adhd छ